I-Qualcomm iya kuphehlelela ukutshaja ngokukhawuleza ukutshaja ngaphandle kwamacingo | I-Androidsis
Intlawulo ekhawulezayo yeQi: Ukutshaja kwe-wireless kweQualcomm
UEder Ferreño | | MWC, Izaziso
Ukutshaja ngaphandle kwamacingo yinto eqhelekileyo kwi-Android namhlanje. Isebenzisa ukutshaja ngaphandle kwamacingo kweQi, Zikhona zonke iimodeli eziyisebenzisayo namhlanje. Umahluko omkhulu ngokutshaja ngokukhawuleza, apho uphawu ngalunye linoxanduva lokudala iindidi zomthwalo wakho. Nangona iQualcomm ilungiselela ukwenza ukungena kwayo kweli candelo lokutshaja ngaphandle kwamacingo ngenkqubo yayo, sele ibhengezile.
I-Qualcomm ibhengeze iQi ekhawulezileyo, Inkqubo yayo yokusebenzisa olu hlobo lwentlawulo kwii-smartphones ze-Android. Linyathelo lokwenza i-chipmaker ukwenza ukutshaja ngaphandle kwamacingo ngokukhawuleza okukhulu, ukongeza kwimfuno yokuseka umgangatho kuyo. Ke abavelisi beefowuni baya kuba nakho ukufikelela kwirhafu emele ukukhawuleza.
Esi sibhengezo senziwe yinkampani senziwe kumnyhadala oququzelelwe yi-MWC 2019. Kuyo baxoxe ngezihloko ezahlukeneyo, njengokufika kwe5G kwiifowuni eziphezulu. Kuba ifemu iya kudibanisa imodem yayo yeX55 kwiprosesa yayo ephezulu yokuphela konyaka olandelayo. Baye bayiqinisekisa kumsitho ngokwawo. Nangona le ayisiyiyo kuphela imbambano esele ixoxiwe. Kungenxa yokuba iQualcomm isishiya nedatha kule ntlawulo ingenazingcingo.
Kuba inkampani izokwandisa iCharge yayo ngokukhawuleza, intlawulo yayo ekhawulezayo, nakwicandelo lokutshaja ngaphandle kwamacingo. Ifuna ukugcina imigaqo-nkqubo efanayo, ukubiza imali ngokukhawuleza, kodwa kule meko ngaphandle kwentambo. Ngale ndlela, abasebenzisi abane-smartphone eneprosesa yeQualcomm Snapdragon banokuba nale nkqubo. Umbono wenkampani kukuba kuvavanywe kwaye kumiselwe inkqubo esemgangathweni kweli candelo.
Nangona iyinto ekufuneka ifikelele kwintengiso kancinci kancinci, njengoko inkampani ngokwayo isitsho kule ntetho. Kodwa okwangoku sele sinomvelisi wokuqala wefowuni oza kuyisebenzisa le nkqubo intsha yeQualcomm. I-Xiaomi iya kuba luphawu lokuqala ukuyifaka, njengoko isitsho inkampani kule ntetho. Intlawulo enye engenazingcingo engama-20W, ngokungathandabuzekiyo iya kukhawuleza kakhulu, ngokukhawuleza okukhulu kunale ikhoyo ngoku. Yenye yeenzuzo zayo eziphambili kunye neleta yokugubungela.
Okwangoku, Kukho abavelisi ababini kuphela abanolu hlobo lwentlawulo. Ziyi-Samsung kunye neHuawei, ezisebenzisa iinkqubo zazo. Bobabini bane-20W yokutshaja ngaphandle kwamacingo okufumanekayo kwezinye zeefowuni zabo. Kodwa umbono kukuba olu hlobo lweemithwalo luya kwandiswa kwimarike. Ke uXiaomi uya kuba luphawu lokuqala lokuba nenkqubo yeQualcomm. Ngokuqinisekileyo ibonisa umzuzu obalulekileyo kuzo zombini iinkampani.
IQualcomm ikucacisile oko Bafuna inkqubo yabo ifikelele kubo bonke abavelisi kwi-Android. Ngumbono ngale Ntlawulo ikhawulezayo yeQi, eya kuthi ibe yeyomntu wonke. Nangona le nkqubo ayizukukhawuleza kakhulu. Ke ngoko kuya kuthatha iminyaka embalwa ukufikelela kuninzi lwezixhobo zentengiso. Nangona bengafuni ukunika imihla ethile nokuba. Kuba ixhomekeke kumvelisi ngamnye ukuba ayifaki okanye ayifaki le nkqubo intsha evela kwinkampani yaseMelika.
Namhlanje, uninzi lwee Itshaja ezingenazingcingo ukuba sifumene, banika amandla e-5W. Le yinto isekude kwi-55W ethi ezinye iintlobo zokutshaja ngokukhawuleza ziyakwazi ukubonelela. Ukutshaja kancinci kunye namandla asezantsi isesona sitshixo siphambili sokutshaja ngaphandle kwamacingo namhlanje. Into apho iQualcomm ifuna ukuzisa utshintsho ngale nkqubo intsha. Ngaphandle kwamathandabuzo, ithembisa ukuba iya kuba yinkqubela phambili ecacileyo malunga noku. Nangona kuya kufuneka silinde ithutyana de ifike kwiimodeli zokuqala. UXiaomi uya kuba ngowokuqala, kunokwenzeka ngo-2020. Siza kuba neendaba ezininzi kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » MWC » Intlawulo ekhawulezayo yeQi: Ukutshaja kwe-wireless kweQualcomm
Amaqabane eXiaomi kunye nokuKhanya ukuzisa iikhamera ezininzi kwii-mobiles zabo
Ngubani oza kuba ngoyena mpheki upholileyo ehlabathini? Wena kwindawo yokutyela eFunky